Kpọtụrụ mbiputegharị bụ a onu nke na-eme hell si nke onye ọrụ nke iPhone na maka otu ihe na duplicated kọntaktị na-ga-ehichapụ iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ihe kasị mma nke na ekwentị na kọntaktị na-nọ na iji. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nkuzi na nke a na-agụ ma na-aghọta na zuru mere na kasị mma na ndị ọkaibe usoro ga-kọwara na-abụghị nanị soro kamakwa etinyere ọ bụrụ na e a oge ọzọ zere ihe ọ bụla mgbaka.
Otu Pịa ka ihichapụ niile / multiple kọntaktị site na gị iPhone
Wondershare TunesGo Ochie bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na-arụpụta mgbe ọ na-abịa na kọntaktị management on iPhone. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume a na-eji na akara na ntụziaka nke mmepe nke mere na nsonaazụ kacha mma na-enwetara. Ihe omume ahụ bụ bụghị nanị mfe iji ma ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye ihe kasị mma nke echiche na e agbakwunyere n'ime na N'ihi ya ọ na-enye ihe dị egwu ọrụ ahụmahụ.
-Esonụ bụ ụfọdụ isi atụmatụ nke usoro ihe omume nke maa-eme ka ọ otu nke kasị mma niile ugboro:
E wezụga kọntaktị a usoro na-emekwa ka n'aka na ọ ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahụmahụ na ikwu na iTunes, videos na foto management.
iPhone achọ iTunes ka mmekọrịta na nyefee music na ngwaọrụ ma na ojiji nke Wondershare TunesGo Ochie mmachi a ebuliwo ozugbo na ihe niile na music management-aghọ mfe.
Nke a na usoro nwekwara ike-eji na-eme ka n'aka na music nkekọrịta si iCloud dị mfe na onwe-akpali.
The Dọrọ na dobe atụmatụ agbakwunyere n'ime usoro ihe omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na-arụpụta mgbe ọ na-abịa na-ebufe photos, ozi, kọntaktị na faịlụ.
Ndị kasị mkpa n'ókè nke niile bụ na usoro ihe omume na-abịa na a ego azụ nkwa nke ụbọchị 30 na-enweghị ajụjụ jụrụ.
Iji Wondershare TunesGo Ochie ka ihichapụ niile kọntaktị site na iPhone
Usoro na e kwuru n'okpuru bụ onye ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ahụmahụ na ikwu na doro ajụjụ:
Jide n'aka na usoro ihe omume anyị ebudatara, arụnyere na iPhone na-ejikọrọ mere na isi interface achọpụta rụọ ya:
Site n'aka ekpe panel ebe ekwentị data a na-egosipụta na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na kọntaktị mmanya na-ahọrọ na mgbe ahụ kọntaktị na a ga-ehichapụ nwekwara ahọrọ:
Nhichapụ button a na-ahụ na-pịrị iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na usoro-agwụ ebe a dị ka kọntaktị ga-ehichapụ site na ekwentị kpamkpam:
Olee ka ihichapụ oyiri kọntaktsị na iPhone
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahụmahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro na nakweere na mma mmasị nke ngwaọrụ ::
Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata, wụnye na mgbe ahụ jikọọ na ngwaọrụ nke mere na usoro ihe omume na-achọpụta rụọ ya.
Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na kọntaktị mmanya a pịrị na ekpe panel na edepuchaala oyiri taabụ na-ahụ pịrị na top. Ọ ga-emekwa n'aka na oyiri kọntaktị na-ahụrụ na egosipụta:
Usoro ihe omume ga-ahụ na-amalite na-ahụ oyiri kọntaktị:
4. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka Pịa igodo Nhichapụ button mgbe na-ahọpụta ndị Rịọ kọntaktị na-akwụsị ndị usoro:
Common mbipụta na ihichapụ iPhone kọntaktị
Ndi ana-akpo akwụsị
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mbipụta na na-eche ndị mmadụ na ikwu na kọntaktị nhichapụ. Imewe nke iOS bụ maka na nke na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ntuziaka gwa ke iche iche forums na-soro dị ka ndị ebe a
Ndi ana-akpo adịghị ghọtara
Ọ bụkwa otu n'ime mbipụta ebe ọnụ ọgụgụ nke e echekwara na iPhone megide a kpọmkwem aha na-abụghị egosipụta na ọnụ ọgụgụ na-egosipụta kama. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị njọ mbipụta niile ugboro na onye ọrụ nwere ike ịhụ na metụtara ngwọta ebe a
iCloud syncs ehichapụ kọntaktị
Ọ bụkwa otu n'ime nsogbu ndị na-chere ihu onye ọrụ nke ọ bụghị nanị discourages ojiji nke ngwaọrụ, kamakwa ọ na onye ọrụ akụ. Usoro e kwuru zuru ebe a na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị na-eso nzọụkwụ iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ nsogbu dị ka kọntaktị mbubata, bupu na ngwaọrụ metụtara mbipụta nke na-eduga ná nsogbu na maka otu ihe mere ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị eso online forums na posts iji jide n'aka na nsogbu ahụ bụ kpebiri na okwu a bụ nke igbochi ozugbo na ihe niile.
> Resource> iPhone> Olee Iji hichapụ ihe niile / oyiri Ndi ana-akpo si gị iPhone